Ụmụaka na-eto eto na-akọ akụkọ banyere akụkọ ndụ site LifeBogger
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Ụmụaka na-eto eto na-akọ akụkọ eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football football onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Black Pearl.'. Lemụaka Pele Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Ee, ọ bụ naanị ndị egwuregwu bọọlụ karịrị oke nke okike. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Pele Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Edson Arantes do Nascimiento nke a makwaara dị ka Pele mụrụ na Três Corações, Brazil, site n'aka Mr João Ramos do Nascimento AKA Dondinho (nna) na Mrs Celeste Arantes (nne).
O tolitere n'obodo Três Corações, na steeti Minas Gerais, ihe dị ka 200 kilomita n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Rio de Janeiro.
A mụrụ Pele dị ka nwa mbụ nke ezinụlọ Dondinho. Mgbe a mụrụ ya, nne na nna ya gụrụ ya 'Edison ' mgbe onye na-emepụta ihe Thomas Edison.
Ọ tolitere na-enwe 2 aha nickname ụmụaka; "Dico na Pele". Ezinụlọ ya nyere ya aha nick "Diciko" nke pụtara 'Nwa nwoke nke Dike'.
A na-ewere nna Pele, nke a makwaara dị ka Dondinho dị ka onye agha na pitch. Ọ bụ onye nwere obi ike n'ịgba ọsọ.
Aha aha "Pelụ" si n'aka ụmụ klas ya n'ụlọ akwụkwọ. Pele bụ ụdị obi ụtọ nke na-achọghị ịhapụ ndị enyi na-enye nsogbu na ịkwa ya emo n'ụlọ akwụkwọ.
Ọ ga-amụmụ ọnụ ọchị ọbụna mgbe ọ na-echegbu onwe ya. Agbanyeghị enwere oke. Ndị enyi ya jiri ụzọ okwu ọjọọ ya.
N'oge ahụ n'ụlọ akwụkwọ, a na-akpọ Pele ịkpọ aha onye ọkacha mmasị ya Vasco da Gama 'Bile' as “Ikpokọta”. Wrongzọ ọjọọ ya nke ịkpọ aha ya mere ka ụmụ klas ya kwaa ya emo.
N'ihi ya, ha kpebiri inye ya aha ahụ "Pelụ" na-enweghị obere ihe ọmụma banyere ihe ọ pụtara na obodo bọọlụ.
N'ezie, ụmụ klas ya amaghị mgbe ọ bụ aha ọlaedo. E nyere aha ahụ site n'ịgba ọchị. Aha nke mechara bụrụ nke kachasị, ọbụlagodi karịa aha 99.9% nke ụwa mara kemgbe.
Dị ka otu ajụjụ ọnụ si kwuo, Pele kwuru na aha ahụ bụbu aha njirimara nwata, nke ọ na-enweghị mmasị na ya. Mgbe a jụrụ ya Maka gịnị? nke a bụ ihe o kwuru…
Ọ bụghị aha otutu m chọrọ dika nwata. Ezinụlọ m kpọrọ m Dico, ndị di m n'okporo ámá kpọrọ m Edson.
Mgbe ha bidoro ịkpọ m Pelé, achọghị m ha. Echere m na ọ bụ aha mkpofu. Ugbu a ị hụla ya n'ime Akwụkwọ Nsọ.
Na Hibru Pele pụtara ọrụ ebube. Otu ọkà mmụta okpukpe chọpụtara nke a, wee gwa m. Nke pụtara na ọ dị n ’Baibul.
N'oge ahụ mgbe mmadụ sịrị, “Hey, Pele,” m ga-eti mkpu ma we iwe. N'otu oge, amuru m nwa klas m ihe n'ihi ya ma kwụsịtụrụ m ụbọchị abụọ.
Nke a, n'ụzọ doro anya, enweghị mmetụta achọrọ. Kidsmụaka ndị ọzọ ghọtara na ọ na-ewute m ma ya mere ha malitere ịkpọ m Pele karịa.
Mgbe ahụ ka m matara na ọ bụghị m ka a na-akpọ m. Ugbu a, ahụrụ m aha ahụ n'anya - mana n'oge ahụ ọ na-emerụ m ahụ na enweghị njedebe. ”
Pele Biography Eziokwu - Nwatakịrị Nwatakịrị:
Ọhụụ nke nwa okorobịa nke Pele nwere ịghọ onye na-anya ụgbọelu mere ka mkparịta ụka dị mkpirikpi mgbe ụgbọ elu ụgbọelu dabara n'ụlọ ya, na-egbu onye na-anya ụgbọelu na ndị njem niile nọ n'ụgbọ.
Pele na-eto eto hapụrụ ụlọ ya ozugbo wee gaa ụlọ ọgwụ iji lee autopsy na, mgbe ọ hụrụ ozu onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ, o kpebiri na nrọ nwata ya ga-akwụsị. N'ezie, ọrụ nke ụgbọ elu na-efe efe abụghị maka ya.
Dika odi nma inwe ya, àgwà nzụlite nna ya gbasakwara bọọlụ, Dondinho wee bụrụ onye nkuzi bọọlụ ọkachamara ọkachamara nke Pele.
Pele na-ekwuputa nkwado nne ya maka oke agụụ nwata ya ịbụ onye ọkwọ ụgbọ elu ọkachamara. Obi adịghị ya ụtọ ịhụ ya ka ọ na-agba bọl dịka ọrụ.
Pele Biograph - Ebili na Ogbenye:
Ezinụlọ ya dara ogbenye. Pele n'onwe ya abughi nwa bara ọgaranya. N'oge ahụ, ego ego enyere ya enweghị ike ị nweta bọọlụ.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Pele na-eji obere sọks nke a na-eji akwụkwọ egwuri egwu n'ihi na ọ gaghị enwe ike ịzụta bọlbụ iji nọrọ n'ụlọ ya. N'oge ụfọdụ, ọ na-eji mango na-egwu bọl n'oge oge ezumike.
N'ihi obere ego o nwere, Pele ga-arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche dị ka nwatakịrị iji nweta ego ọzọ. Ọ natara nkuzi mbụ ya na bọl sitere n'aka nna ya wee kpọọ egwuregwu dị iche iche na-amu amu n'oge ọ bụ nwata.
N'oge na-adịghị anya Pele chọpụtara na a gọziri ya na ikike karịrị nke ahụ maka egwuregwu ahụ. Ọ malitere site n'ụdị football nke ya. Nke a ka o mepụtara mgbe ọ na-eme ọtụtụ bọlbụ n'ime ụlọ.
Na Brazil n'oge ahụ, bọọlụ ime ụlọ na-ewu ewu. N'ezie, Pele bụ nanị ụmụaka ga-achị mba ahụ dum. Ọ bụ ịdọ aka ná ntị ya, ikike ịgafe, ọsọ ọsọ na ike mgbaru ọsọ nke mere ka ọ daa.
Ndụ Ezinụlọ Pele - Banyere papa ya:
Nna Pele, João Ramos do Nascimento AKA Dodinho mụrụ na 2nd nke Ọktoba 1917. Ọ bụ onye Brazil na-awakpo etiti na-aga n'ihu ma ọ bụghị naanị nna, kama ọ bụ onye ndụmọdụ na ezigbo enyi nwa ya nwoke, bụ Pelé.
Pele (Aka ekpe) na Nna, Dodinho (Aka nri).
Dondinho na-egwuri egwu maka ọtụtụ obere klọb n'oge ọrụ ya. Ọbụna gị onwe ya enweghi mmetụta dị ukwuu dị ka nwa ya nwoke, o mere ihe nwa ya nwoke na-enweghị ike ịkụ aka na ọrụ ya. Ga-amata nke ahụ ka ị na-agụ ya.
N'oge ahụ, mgbe ọ na-egwu egwu, football so na ọrụ kacha akwụ ụgwọ. O doro anya na ndị na-agba bọọlụ so na ndị dara ogbenye na mba ahụ.
N'ihi ya, Dondinho dara ogbenye. Ọ lara ezumike nká n'isi ụtụtụ n'ihi mkpa ọ nwere inweta ego site na ọrụ ndị ọzọ.
Mgbe ezumike nká football, Dondinho weere ọrụ nke onye na-ehicha ụlọ ọgwụ ebe o tinyere ego iji nyere nwa ya aka ọrụ.
Dondinho kụziiri Pele ka ọ ga-esi gafee n'ụzọ ziri ezi, rụọ ọrụ dribble, jiri ubu na-ahapụ ndị na-agbachitere ndị nwụrụ anwụ, ma gbanwee ọsọ ọsọ ngwa ngwa karịa ndị na-agbachitere ya. Na karịa ọrụaka nke football, Pele mụtara ihe.
Ọ mụtara otú ọ ga-esi bụrụ ezigbo mmadụ mgbe ya na nna ya nọ. Pele na-eto eto nwetara ọ joyụ na agụụ site na mmekọrịta egwu na nna ya nwere.
Ọzọkwa, ọ hụrụ ụzọ nna ya si eji echiche ya akpọrọ ihe, dị ka a ga-asị na ọ bụ nwoke.
Mgbe Dondinho na-arụ ọrụ na nlekota ahụ, ọ ga-atụgharị uche banyere egwuregwu a ma ama nke ọ zutere, na-ekwukwa banyere nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, bụ onye gosipụtara nkwa pụrụ iche dịka ndị na-agba ụkwụ ma nwụọ na 25.
Ọtụtụ ọrụ ya ezughị oke. Otú ọ dị, anyị maara na n'ihe dịka afọ iri na abụọ n'ọdụ ụgbọelu Brazil, Dondinho mere ihe mgbaru ọsọ 893 na egwuregwu 775 gụnyere 19 na egwuregwu 6 maka Brazil.
Dondinho bụ nọmba 9 a ma ama ebe nwa ya nwoke na-egwuri egwu dika nọmba 10. Pele choro maka oru di omimi karia ebe o ga-acho oria ozo ma bia n'ihu.
Ugbu a bụ ihe ndekọ. Dondinho weere ihe mgbaru ọsọ ise ya na isi ya n'otu egwuregwu.
Pelé na-achọsi ike iti ihe ndekọ a ma ọ nweghị ike ịrụ ọrụ ya. Dondinho na-ebute ihe mgbaru ọsọ ka na-abụ ndekọ ụwa na-akwadoghị na ihe ngosi nke Pele n'onwe ya enweghị ike ikwere.
Mgbe a jụrụ ya banyere ya, Pele kwuru otu oge; “Naanị Chineke nwere ike ịkọwa otú papa m si mee nke ahụ.”
Enweghi ike igosi ihe Dondinho ebe a ka anyi chetara ya mgbe o na ede banyere nwa ya nwoke 'Pele'. Dondinho biri ndụ maka afọ 89. Ọ nwụrụ na 16 November 1996 na São Paulo.
Ndụ Ezinụlọ Pele - Banyere nne ya:
Pele nwere mama na-enweghị nchebe aha ya bụ nwanyị Celeste Arantes. Ọ bụbu nwa agbọghọ tupu ọ ghọọ nwunye oge niile. E kwuwo na n’azụ nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nwanyị. N'okwu a, ọ bụ nne ka ukwuu.
"Mama m bụ nwanyị mara mma," ka Pelé kwuru. "Ọ na-elekọta ezinụlọ m na agụmakwụkwọ m mgbe nile, ọ kụziiri m otú e si asọpụrụ ndị mmadụ. O nyere m ohere mụta otú e si asọpụrụ ndị mmadụ. "
Ha dị nnọọ nnọọ ka Pele na nna ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, nne ya anọghị na Pelé mgbe niile ka ọ nọ na bọlbụ.
Dona Celeste, onye na-elegara ụmụ ya anya mgbe niile, hụrụ bọl dịka ha abụọ "Nchụso ọnwụ" na “Ụzọ doro anya nke ịda ogbenye.” Ọ chọrọ ka Pelé lekwasị anya n'ihe ọmụmụ ya.
Ọ dị ka mmụọ ozi nọ ọdụ n'ubu Pele, na-agba ya ume mgbe niile ime ihe ziri ezi, omume, na-ewuli elu.
Dị ka Pele si kwuo, "N'afọ ndị mbụ ahụ, mgbe ọ hụrụ m ka m na-egwu bọl, ọ ga-enye m ezigbo okwu ọnụ. Ma mgbe ụfọdụ, ọ ka njọ! "
Mmekọrịta mmekọrịta chiri anya:
Nwunye mbụ ya na Rosemeri dos Reis Cholbi nọ na 1966.
Di na nwunye nwere ụmụ nwanyị abụọ. Ha gbara alụkwaghịm na 1982. Site na 1981 ruo 1986, ya na Xuxa nwere mmekọrịta ịhụnanya, onye ọ nyeere ka ọ bụrụ ihe nlereanya. Xuxa bụ naanị 17 afọ mgbe ha malitere ịlụ.
Na 1994, ọ lụrụ onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ na onye ọbụ abụ bụ Assíria Lemos Seixas. Pelé kpochapụrụ anya mmiri mgbe o chetara oge ọṅụ ya n'oge agbamakwụkwọ ya na Assiria Seixas Lemos na Eprel 30, 1994 na obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke Recife, Brazil.
Ihe karịrị ndị uwe ojii steeti 170 na-echekwa di na nwunye ahụ na ndị ọbịa narị atọ na Churchka Anglican Episcopal. Ọ bụ alụmdi na nwunye nke abụọ maka ha abụọ. Ọ mụrụ ụmụ ejima, Joshua na Celeste. Ha kewara na 300.
Na June 2016, Pele, 75, lụrụ Marcia n'otu obere okpukpe na Guaruja n'ụsọ oké osimiri Sao Paulo, Brazil.
Igwe kpakpando a na-agba ezumike nká enwewo mmekọrịta na Marcia maka afọ isii tupu alụmdi na nwunye ha.
N'ihe gbasara ibi ndụ, a ga-enwe mmetụta ụfọdụ nke Pele. Nke mbụ, ọ na-enwe mmasị ịse foto. N'okpuru ebe a bụ Pelé mara mma na-egosi n'ihu Mercedes-Benz na 1970.
Ihe oyiyi ya nke na-enwu gbaa dabara adaba, ebe ọ bụ na ihe ọ na-egwu n'egwuregwu mere ka a kpọọ ya utu aha bụ́ “O Rei Pelé,” nke pụtara “Eze Pelé.”
N'ikwu banyere Lifestyle, isi ihe ọzọ kwesịrị iburu n'uche. Ọ hụrụ ịkpọ ụbọ akwara ya.
Na foto dị n'okpuru ebe a, Pelé na-atụrụ ndụ n'akụkụ ọdọ mmiri ụlọ nkwari akụ ya na guitar mgbe 1970 World Cup na Mexico. Asọmpi ahụ bụ egwu na ntị ya, dịka Brazil kwuru na ọ bụ ya bụ iko mba ụwa nke atọ.
Ebumnuche Mgbasa Ozi & Akụ nke Mba:
Pelé na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe ọ na-asa na ime ụlọ ịwụ na May 1963. Ọ bụ onye mgbasa ozi n'ebe ọ bụla ọ gara, na-aghọ ndị kasị ama ama ama ama ama.
Gọọmenti Brazil kwuru na Pelé bụ akụ na-achị isi na 1961 iji gbochie ya ịpụga mba ahụ.
Hụnanya maka Neymar:
Ha abụọ bụ ezigbo enyi na-enweghị ike ịkọwa. Dabere na Neymar, “Oge mgbanwe nke ndụ m bụ mgbe eze bọọlụ, Pele kpọrọ m na mbụ. Ọ gwara m ka m gbuo Chelsea ".
Neymar ejirila akụkọ ifo na-ese otu mgbe. Pele kwenyere Neymar Naanị ịkwalite ikike isi ya karịrị Real Madrid na-eduzi goolu bọọlụ Cristiano Ronaldo.
Pele Untold Biography - Agha Obodo kwụsị-Ọkụ:
Iji mee ka ego na-agagharị, na-akwụ ụgwọ Pele ụgwọ ọrụ, iji nweta ego maka ụlọ ọrụ ahụ site na ihe onwunwe ha na-agbata n'ọsọ, Santos agagharị na ụwa na-egwu ndị enyi dị elu, na-akwụ ụgwọ ụdị ụlọ ha.
Otu enyi na enyi Lagos, Naijiria kpaliri akụkụ abụọ ahụ na Agha Obodo Nigeria ịkpọ oku nkwụsị 48 ka ha nwee ike ile ya anya.
Ndị agha Nigeria na nke Biafran Rebel abụọ lere Pele ka ọ na-eleta mba ha agha tisasịrị. O juru Pele anya mgbe ọ hụrụ Nigeria na nke mbụ ya.
Santos bịanyere aka na ya mgbe ọ bụ 15. O meriri ihe mgbaru ọsọ anọ na nmalite onu ogugu ya na egwuregwu nke FC Corinthians na September 7, 1956.
Ọ na-ama ọganihu ọbụna n'oge ọ bụ nwata, na-ebute ụzọ na 1958 Brazil National Team ka ọ bụrụ mmeri World Cup na Sweden mgbe ọ dị afọ 17.
Na 17, Pele ghọrọ ọdụdụ nwa nke mmeri World Cup. O nyekwara goolu abuo n'ikpeazu na Sweden.
Ihe mgbaru ọsọ mbụ ya ebe ọ fụrụ bọl na onye na-agbachitere ya na-agba ume na akuku nke net, ahọrọ dịka otu n'ime ihe mgbaru ọsọ kasị mma na akụkọ ntolite nke ụwa.
Na-eso ihe mgbaru ọsọ nke Pelé, onye ọkpụkpọ Sweden Sigvard Parling ga-aza ajụjụ n'ikpeazụ; "Mgbe Pelé meriri ihe mgbaru ọsọ nke ise na Final ahụ, m ga-eme ihe n'eziokwu ma kwuo na ọ dị m ka m na-akụ aka"
Ọ bụ na 1958 World iko na Pelé malitere yi akwa na 10 nọmba.
Pelé na-egwuri egwu Egwuregwu South America. Na Ngwuregwu 1959 a na - akpọ ya onye ọkpụkpọ kacha mma n'egwuregwu ahụ, ọ bụ onye nchịkwa na 8 maka ihe mgbaru ọsọ, dịka Brazil bịara nke abụọ n'agbanyeghị na ọ na - emeghị ihe ọ bụla.
Onye na-eme ihe mgbaru ọsọ nke ọma, amaara ya maka ikike o nwere ike ịtụ anya ndị iro nọ n'ógbè ahụ ma jiri aka ma ọ bụ ụkwụ gbaghaa ohere ọ bụla.
Na Santos, a maara November 19 dị ka 'Pele Day' iji mee ememme ncheta nke 1,000th ya.
Pele bụ nke ise na ndepụta bọọlụ bọọlụ iko mba ụwa niile nwere mgbe iri na abụọ - yana onye Brazil nke abụọ kachasị nọrọ na Ronaldo.
Mgbe Pele lara ezumike nká, JB Pinheiro, onye nnọchianya Brazil na United Nations, kwuru, sị: "Pele gbara bọọlụ afọ iri abụọ na abụọ, n'oge ahụkwa, ọ mere ihe karịa iji kwalite ọbụbụenyi ụwa na mkpakọrịta n'etiti ndị nnọchi anya mba ọ bụla ọzọ."
Pele nwetara aghụghọ okpu iri abụọ na itoolu, wee gbata goolu anọ n'ime oge iri atọ na ise, ise na oge isii, na otu ugboro meriri asatọ n'otu egwuregwu. Na ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ Pele ji bọọlụ agba.
Pele nwetara ihe mgbaru ọsọ atọ ma ọ bụ karịa na-atụ egwu ugboro 129 n'oge ọrụ ya. 1 n'ihe mgbaru ọsọ ọrụ. 1, 280 na 1, egwuregwu 360. Ọ na-ejidekwa ndekọ ụwa maka aghụghọ okpu. 92 na mkpokọta. Pele ekweghị na ntaramahụhụ. O kwuru otu oge, sị: “A ntaramahụhụ bụ ụjọ ụjọ ụzọ akara.”
Na 1997, e nyere Pele nsọpụrụ ugwu Britain. A họpụtara ya dị ka Mịnịsta Egwuregwu na Brazil na 1995, na-eje ozi ruo 1998.
Ọ bụ Kọmitii International Olympic (IOC) hoputara ya na narị afọ nke 1999. Pele abanye na National Soccer Hall of Fame na 1999.
Pele enweghị ego Jersey:
Mgbe Pele na-egwuri egwu na Niu Yọk, ọtụtụ n'ime ndị iro ya chọrọ ịwa uwe ya na ya ga-enye onye ọ bụla n'ime ha otu uwe elu mgbe ọ bụla egwuregwu.
"Pele bụ ihe kachasị mma," Gordon Bradley kwuru, otu n'ime ndị nkuzi klọb n'oge ahụ. Mgbe ụfọdụ, anyị na-ewere uwe 25 ma ọ bụ 30 gaa egwuregwu - ma ọ bụghị ya, anyị agaraghị esi n'ọgbọ egwuregwu pụta ndụ. "
Pele Biography - Ọ bụghị enyi Maradona:
Pele na Maradona abụghị ezigbo enyi. Na 2010, Pele kwuru banyere Argentine: “Ọ bụghị ezigbo onye nlereanya maka ndị ntorobịa. O nwere onyinye Chukwu nyere ya nke inwe ike ịgba bọl, ọ bụ ya mere o jiri nwee ihu ọma. ”
Nzaghachi Maradona: "Ònye na-eche banyere ihe Pele kwuru? Ọ bụ na ihe ngosi nka. "
Pele kwuru na 2006: “Ruo afọ 20, ha ajụwo m otu ajụjụ ahụ, ònye kasị ukwuu? Pele ka ọ bụ Maradona? Ana m aza na ihe niile ị ga - eme bụ ileba anya n'eziokwu - goolu ole ka o ji aka nri ya ma ọ bụ isi ya mee? "
Onye nnọchi anya UN nke ọma:
Onye na-ekwuchitere ya na onye na-eme egwuregwu, Pelé kwalitere mgbasa ozi ọgwụ ọjọọ tupu ya na Diego Maradona na Michael Platini na May 23, 1988 na France.
Ọ na-eji aha ya eme ihe dị iche na bọl, na-eje ozi dị ka onye nnọchi anya nke United Nations maka gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi.
Pele na-arụ ọrụ dịka onye nnọchiteanya UNICEF na-eme ebere na dịka onye nnọchiteanya nke United Nations, na-arụ ọrụ iji kpuchido gburugburu ebe obibi na ịlụ ọgụ na Brazil.
Egwuregwu Pee Pele:
Pele nwere egwuregwu vidio a kpọrọ aha ya na 1980s akpọ 'Pelé's Soccer'. Ọ bụ egwuregwu bọọlụ maka Atari 2600, yana ọ ga-abụkwa na ọ kachasị egwuregwu bọọlụ kacha ochie. Egwuregwu ahụ na-enye gị ohere ịme ihe mgbaru ọsọ n'ofe South America.
Mgbe ị na-egwu ya, ị na-ebido ụzọ n'okporo ámá ndị Brazil, ma na-eme ihe ngosi iji gosi onye na-eche nche. Mgbe ahụ, gaa na mpaghara ọhụrụ na ụzọ ị na-aga nnukwu ámá egwuregwu.
Akụkọ Pele - Na-akwalite akpụkpọ ụkwụ ya:
Ka ọ na-akwado ịgba egwu na egwuregwu n'oge Mexico '70, Pele gosipụtara onye nchịkwa ahụ na ọ dị mkpa ka ọ kee eriri ya. Igwefoto ahụ mere ka ekpughere akpụkpọ ụkwụ Puma na-aga n'ihu - ụlọ ọrụ ahụ mechara nwee nnukwu ọrịre ahịa.